italy | Ratopati
इटलीमा कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा ७ महिनापछि विद्यालय सूचारु access_timeभदौ २९, २०७७
एजेन्सी । इटलीको कोरोनाभाइरसबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा सात महिनापछि सोमबारदेखि विद्यालयहरु सूचारु भएका छन् । देशको कोडोग्नो क्षेत्रका बालबालिकाहरु गत फेब्रुअरी २१ देखि विद्यालय जान नपाएकोमा सोमबारीदेखि विद्यालय प्रवेश गरेका हुन् । देशको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने य...
इटलीमा मृतकको आधिकारिक आँकडा ३२ हजार तर ५१ हजारको मृत्यु भएको दाबी access_timeजेठ ९, २०७७
सुरुमा कोरोनाभाइरसले सबैभन्दा प्रभावित चीनलाई पारेको थियो र दोस्रो स्थानमा थियो इटली । पछि इटलीले चीनलाई पछि पारिदियो र संक्रमणका साथै मृत्युको मामलामा यो देश शीर्ष स्थानमा रह्यो । त्यसपछि अमेरिकाले इटलीलाई पछि पार्यो । अमेरिकामा हालसम्म ९६ हजारको मृत्यु भइसकेको...
कोरोनाः इटलीमा भन्दा अमेरिकामा बढी मृत्यु, मृतकको संख्या साढे २० हजार पार access_timeचैत ३०, २०७६
कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण धेरै मृत्यु हुने देशको सूचीमा इटली पर्दथ्यो तर नयाँ आँकडा अनुसार अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै मृत्यु भएको छ । वर्ल्डोमिटरको पछिल्लो आँकडा अनुसार अमेरिकामा एकैदिन १८ सय ३० को मृत्यु भएपछि यहाँ मृतकको संख्या २० हजार ५ सय ७७ पुगेको छ । ...
इटलीमा मे महिनासम्म बढाइयो लकडाउन access_timeचैत २९, २०७६
इटलीका प्रधानमन्त्री जुजेप्पे कन्टेले देशको लकडाउनलाई तीन महिनासम्म बढाएको घोषणा गरेका छन् । यसअघि मार्च ९ सम्म लकडाउनको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि यो लकडाउन ३ अप्रिलसम्मका लागि लागू गरिएको थियो जसलाई पछि १३ अप्रिलसम्म बढाइयो । र अब यसलाई ३ मेसम्म बढाइएको छ । ...
इटलीमा मृतकको संख्यामा कमी तर चिन्ता अझै बाँकी access_timeचैत २७, २०७६
इटलीमा आइतबारपछि कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमी आएको छ । साथै, नाजुक स्थितीका बिरामीको संख्यामा पनि कमी आएको छ । तर संक्रमितको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन । यहाँ दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । तसर्थ, चिन्ता अझै पनि बाँकी छ । यहाँ ...
इटलीमा १५ हजार बढीको मृत्युपछि आशाको पहिलो किरण access_timeचैत २२, २०७६
संसारभरी कोरोनाभाइरसको कहर बढ्दो छ तर यो महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै मृत्यु इटलीमा भएको छ । इटलीका अधिकारीका अनुसार शनिबार पनि यो भाइरसका कारण ६ सय ८१ जनाको मृत्य भएको छ जसका कारण मृतकको कूल आँकडा १५ हजार ३ सय ६२ पुगेको छ । तर शनिबार लामो समयपछि इटल...
इटलीमा कोरोनाका कारण ६६ डाक्टरको मृत्यु, ८ हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित access_timeचैत १८, २०७६
इटलीमा अहिलेसम्म १२ हजार ४ सय २८ को मृत्यु भइसकेको छ । यहाँ कूल १ लाख ५ हजार ७ सय ९२ संक्रमितको पुष्टि भइसकेको छ जसमध्ये ४ हजार २३ जनाको स्थिती नाजुक छ । इटलीमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सिलसिला रोकिएको छैन । स्थिती दिनप्रति दिन भयावह हुँदैछ । अझ, क...
इटलीमा एकैदिन ८३७ मृत्यु, मृतकको संख्या १२ हजार नाघ्यो access_timeचैत १८, २०७६
इटलीमा कोरोनाभाइरसका कारण एकैदिन ८ सय ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै मृतकको संख्या अहिलेसम्म १२ हजार ४ सय २८ पुगेको छ । यस्तै, ४ हजार ५३ नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको कूल संख्या १ लाख ५ हजार ७ सय ९२ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ४ हजार २३ जनाको स्थिती गम्भीर छ...
इटालीमा कसरी जोगिइरहेका छन् नेपालीहरु ? access_timeचैत १८, २०७६
–प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमै सबैभन्दा बढी आक्रान्त इटालीमा रहेका नेपाली हालसम्म सङ्क्रमणबाट जोगिए पनि उनीहरु स्थिति कहिले सामान्य होला भन्ने अन्योलमा छन् । श्रम र अध्ययनका लागि करीब एक हजारको सङ्ख्यामा त्यहाँ ...
इटलीमा संक्रमितको संख्या १ लाख नाघ्यो, मृतक साढे ११ हजार बढी access_timeचैत १७, २०७६
इटलीमा एकैदिन संक्रमितको संख्यामा ४ हजार ५० बढीको वृद्धि भएपछि यहाँ संक्रमितको संख्या १ लाख १ हजार ७ सय ३९ पुगेको छ । संक्रमितध्ये ३ हजार ९ सय ८१ जनाको स्थिती जटिल छ । यसका साथै, यहाँ विगत २४ घण्टाभित्र ८ सय १२ जनाको मृत्यु भएपछि मृतकको कूल संख्या ११ हजार ५ ...
कोरोना महामारीः इटालीमा भयावह कायमै,अमेरिकामा सङ्क्रमित १ लाख ४२ हजार access_timeचैत १७, २०७६
एजेन्सी । नाम दिइएको प्राणघातक कोरोना सङ्क्रमणबाट इटालीमा एकै दिन (हिजोमात्र) ७५६ नागरिकको ज्यान गएको छ । यसरी यस देशमा कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १० हजार ७७९ पुगेको प्राप्त पछिल्लो समाचारमा जनाइएको छ । सोमबार बिहानसम्मको यो अवस्थाल...
इटलीमा एकैदिन ९१९ को मृत्यु, अमेरिकामा संक्रमितको संख्या १ लाख नाघ्यो access_timeचैत १४, २०७६
कोरोना भाइरसका कारण इटलीमा एकैदिन ९ सय १९ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै इटलीमा मृतकको संख्या ९ हजार १ सय ३४ पुगेको छ । वर्ल्डोमिटरका अनुसार यहाँ ५ हजार ९ सय ९ संक्रमित थपिएसँगै कूल संक्रमितको संख्या ८६ हजार ४ सय ९८ पुगेको छ । उता अमेरिकामा संक्रमितको रेकर्...
इटाली र स्पेनमा एकैदिन करिब १५ सय जनाको मृत्यु (अपडेट) access_timeचैत १४, २०७६
एजेन्सी । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण युरोपियन मुलुक इटाली र स्पेनमा एकैदिन करिब १५ सय जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार ती दुई देशमा गरी १४ सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बेलुका वल्ड्रोमिटरले जारी गरेको तथ्याँकअनुसार इटालीमा ९ सय १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने स्प...
कोरोनाले इटलीमा ८ हजार बढीको ज्यान लिइसकेका बेला कसरी भइरहेको होला अन्तिम संस्कार ? access_timeचैत १४, २०७६
जब तपाईंको कुनै प्रिय व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ तब ती व्यक्तिलाई अन्तिम पटक हेर्नु र पूरा सम्मानका साथ बिदा गर्नु तपाईंका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आफ्ना प्रियजनलाई अन्तिम बिदाई दिने मौका पनि इटलीका जनताबाट खोसिएको छ । एक ...